जीवशास्त्र के हो? यसमा के विशेषताहरू छन्? यहाँ खोज्नुहोस् नेटवर्क मौसम विज्ञान
हाम्रो ग्रह पृथ्वी एकदम जटिल प्रणाली हो जहाँ जीवित प्राणीहरू र प्रकृति तत्वहरूको बीच लाखौं अन्तरक्रिया छन्। यो यति जटिल र व्यापक छ कि एकल सम्पूर्ण रूपमा पृथ्वी पृथ्वीको अध्ययन गर्न असम्भव छ। पृथ्वी बनाउने बिभिन्न प्रणालीहरूलाई छुट्ट्याउनका लागि, चारवटा उप-प्रणालीहरू परिभाषित गरिए। जैव क्षेत्र, भू-क्षेत्र, हाइड्रोसियर र वातावरण।
भौगोलिक क्षेत्रले पृथ्वीको अंश संकलन गर्दछ ठोस छ जसमा हामी बसोबास गर्ने पृथ्वीका तहहरू फेला पर्‍दछन् र चट्टानहरूको विकास हुन्छ। भू-क्षेत्र धेरै तहहरूको मिलेर बनेको छ।
पृथ्वीको सतह तह, जुन सामान्यतया 500०० र १,००० मिटरको बीचमा भिन्न हुन्छ, जुन माटो र तलछट चट्टानहरूले बनाएको हो।
मध्यवर्ती तह जुन महाद्वीपीय क्रस्टसँग मिल्दछ जहाँ मैदानी क्षेत्र, उपत्यका र हिमाल प्रणालीहरू पाइन्छन्।
तल्लो बेसाल्ट तह जुन समुद्री क्रस्ट फेला पर्‍यो र यसको मोटाई करीव १०-२० किमी छ।
मा अधिक जानकारी को लागी पृथ्वी को तहहरु हामीले भर्खरै छोडेको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
वातावरण पृथ्वीको वरिपरि गैसियस अंश हो। यो नाइट्रोजन (% 78%), अक्सिजन (२१%), र अन्य ग्यासहरू (१%) को ग्यास मिश्रणबाट बनेको छ। यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ बादल र वर्षा बन्छन्, र यसको महत्त्व यो हो हाम्रो ग्रहलाई बसोबास गर्न सम्भव बनाउँदछ।
पृथ्वीको वातावरणको संरचना
जलविभाग पृथ्वीको पानीको भाग हो तरल तरल भाग समुद्र, समुद्र, ताल, नदीहरू, भूमिगत ढलानहरू, आदि हुन्। र ठोस भाग भनेको पोलर क्याप्स, हिमनदी र बरफ फ्लो हो।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, पृथ्वीको प्रत्येक उपप्रणाली बिभिन्न तत्वहरू मिलेर बनेको छ कुञ्जी प्रकार्य ग्रहमा जीवनको लागि। तर एउटा हामी यस लेखमा ध्यान दिन गइरहेका छौं बायोस्फीयर। जीवशास्त्र के हो?
जैव क्षेत्र पृथ्वीको सतहको सम्पूर्ण गैसियस, ठोस र तरल क्षेत्र हो जुन जीवित प्राणीहरूले ओगटेको छ। ती लिथोस्फीयर र हाइड्रोफियर र वातावरण जहाँ जीवन सम्भव छ त्यहाँका क्षेत्रहरू दुबै गठन गरिन्छ।
1 बायोस्फीयरका विशेषताहरू
2 जीवस्थानमा संगठनको स्तरहरू
2.2 जैविक समुदाय
अब जब तपाइँलाई बायोस्फीयर के हो भनेर थाहा छ, हामी यसको विशेषताहरू के हो हेरौं। जैव क्षेत्र अनियमित आयामहरूको पातलो तहले बनेको हुन्छ। यो एक प्रणाली हो कि ग्रह को क्षेत्रहरु लाई संकलन गर्दछ जहाँ जीवन अवस्थित छ सीमा निर्धारण गर्न यो धेरै गाह्रो छ जहाँ जैव क्षेत्र सुरू हुन्छ र अन्त्य हुन्छ। तर अधिक वा कम, जैव क्षेत्र समुद्र सतहबाट करीव १० किलोमिटरसम्म र भूमि सतहबाट १० मिटर तलसम्म फैलन्छ जहाँ रूखहरू र बोटबिरुवाहरूको जरा पस्छ र सूक्ष्मजीवहरू अवस्थित हुन्छन्।
समुद्री भागमा यसले सतहको पानी र समुद्रहरू गहिराइहरू पनि समेट्छ जहाँ जीवन अवस्थित छ। बायोस्फीयर र बाहिर हामीसँग बढी र कम लगाइएको सीमा। त्यहाँ पार्थिव जीवन छैन।
हामीले टिप्पणी गरिसक्यौं, जीवशास्त्रमा जीवन जनावरहरू, बोटबिरुवा र सूक्ष्मजीवहरू (ब्याक्टेरिया र भाइरस) को लागी लगातार तहको रूपमा देखा पर्दैन, बरु व्यक्तिहरू बिभिन्न प्रजातिहरूका हुन्छन्। यी प्रजातिहरू (हालसम्म त्यहाँ दुई लाख भन्दा बढी ज्ञात प्रजातिहरू छन्) वितरित गरीन्छन् र यस क्षेत्रलाई बिभिन्न रूपमा कब्जा गर्दछ। केहि माइग्रेट हुन्छन्, अरुले बिजय गर्छन् र अरुहरु अधिक प्रादेशिक हुन्छन् र आफ्नो वासस्थानको रक्षा गर्छन्।
जैविक क्षेत्र यसको एक उदाहरण हो प्रणाली। हामी प्रणालीलाई परिभाषित गर्दछौं कि कम्पोनेन्टहरूको सेटको सेट जुन एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्दछ, र साथै बाह्य एजेन्टहरूसँग, यसरी कि तिनीहरू सेटको रूपमा कार्य गर्दछन् जुन कायम छ बीचमा कार्यक्षमता। त्यसकारण जैविक क्षेत्रलाई प्रणामको रूपमा पूर्ण रूपमा परिभाषित गरिएको छ किनकि तिनीहरूसँग प्रजातिहरूको सेट छ जसले एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्दछन् र फलस्वरूप, अन्य तत्वहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ जुन जैव क्षेत्रको होइन, तर भू-क्षेत्र, वातावरण र हाइड्रोफियरसँग सम्बन्धित छ। ।
उदाहरणका लागि हामी तत्वहरु, पृथ्वी, पानी र हावामा बदल्छौं। माछा हाइड्रोफियरमा बस्छ, तर फलस्वरूप, जैव क्षेत्रमा, किनकि यो तरल पानीको सम्पर्कमा हुन्छ र जीवन रहेको ठाउँमा बसोबास गर्छ। चराहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। तिनीहरू वायुमण्डल भनिने पृथ्वीको गैसियस तहमा उडान गर्दछन्, तर तिनीहरू पनि जैव क्षेत्रको सम्बन्धित जीवनको क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्।
त्यसकारण, जीवशास्त्रमा त्यहाँ छन् बायोटिक कारक जुन जीवित प्राणीहरूको ती सबै समुदायहरूद्वारा प्रतिनिधित्व हुन्छ जुन एक अर्कासँग र पृथ्वीको बाँकी सबसिस्टमसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्। ती जीवित समुदायहरूको उत्पादकहरू, उपभोक्ताहरू, र विघटनकर्ताहरू मिलेर बनेका छन्। तर त्यहाँ पनि छन् अजैविक कारक त्यो जीवित प्राणीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। ती कारकहरू अक्सिजन, पानी, तापमान, सूर्यको किरण आदि हुन्। यी कारकहरूको सेट, बायोटिक र एबियोटिक, गठन वातावरण।
जीवस्थानमा संगठनको स्तरहरू
जीवशास्त्रमा, सामान्यतया, जीवित प्राणीहरू एक्लोपनामा बस्दैनन्, बरु अन्य जीवित प्राणीहरूसँग र अजैविक कारकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नु आवश्यक छ। यसैले, प्रकृतिमा त्यहाँ छन् संगठन को विभिन्न स्तरहरु। जीवित प्राणीहरूको अन्तरक्रियामा निर्भर गर्दछ र कति ठूलो समूहहरू छन्, त्यहाँ जनसंख्या, समुदाय र इकोसिस्टमहरू छन्।
संगठनको यो स्तर प्रकृतिमा देखापर्दछ जब कुनै खास प्रजातिहरूको बोटबिरुवा, जनावर वा सूक्ष्मजीवहरूका जीवहरू सामान्य समय र रिक्त स्थानहरूमा सहयोग गर्दछन्। त्यो हो, बिरुवाहरु र जनावरहरु को विभिन्न प्रजातिहरु cohabit उहि ठाँउमा र ती उही संसाधनहरूको बाँच्न र विस्तार गर्न प्रयोग गर्छन्।
जनसंख्यालाई सन्दर्भ गर्दा, प्रजातिहरू भेटिने ठाउँ र त्यस जनसंख्याको समय निर्धारण गर्नै पर्छ, किनकि यो खाद्यान्नको अभाव, प्रतिस्पर्धा वा वातावरणमा परिवर्तन जस्ता कारकहरूको कारण समयमै टिकाउँदैन। आज, मानव व्यक्तिको कार्यको साथ, धेरै जनस survive्ख्या बाँच्न सक्दैनन् किनभने उनीहरू बस्ने वातावरणमा रहेको पौष्टिक तत्त्वहरू दूषित वा बिग्रेका हुन्छन्।
जैविक समुदाय एउटा हो जसमा दुई वा बढी जनसंख्याको अस्तित्व हुन्छ। त्यो हो, प्रत्येक जनसंख्या अन्य जनसंख्या र उनीहरूको वरपरको वातावरण संग अन्तर्क्रिया गर्दछ। यी जैविक समुदायहरूले एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्ने विभिन्न प्रजातिहरूको जीवहरूको सबै जनसंख्या समावेश गर्दछ। उदाहरण को लागी, वन, पोखरी, आदि। तिनीहरू जैविक समुदायहरूको उदाहरण हुन्, किनकि त्यहाँ माछा, उभयचर, सरीसृप, शैवाल र तलछट सूक्ष्मजीवहरूको जनसंख्याको सेट छ जुन एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्, र फलस्वरूप, पानी (श्वसनमा) जस्ता जटिल जैविक कारकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ, प्रकाश पोखरी र तलछट हडताल।
इकोसिस्टम संगठनको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा जटिल स्तर हो। यसमा जैविक समुदायले एक सन्तुलित प्रणाली बनाउनको लागि एबियोटिक वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। हामी ईकोसिस्टम लाई परिभाषित गर्दछौं एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्ने निश्चित क्षेत्रको बायोटिक र एबियोटिक कारकहरूको सेट। इकोसिस्टममा बस्ने विभिन्न जनसंख्या र समुदायहरू एक अर्कामा र अजैविक कारकहरूमा निर्भर छन्। उदाहरणका लागि, उभयचरहरूलाई खानाहरूका लागि कीराहरू चाहिन्छ, तर बाँच्नको लागि तिनीहरूलाई पानी र प्रकाश पनि चाहिन्छ।
बायोटिक र एबियोटिक वातावरण बीचको अन्तरक्रिया प्रकृतिमा असंख्य अवसरहरूमा देखा पर्दछ। जब बोटहरू प्रकाशसंश्लेषण गर्छन्, तिनीहरूले वातावरणसँगै ग्यासहरू साटासाट गर्छन्। जब जनावरले सास फेर्छ, जब यो फीड हुन्छ र त्यसपछि यसको फोहोर हटाउँछ, आदि। बायोटिक र एबियोटिक वातावरणको यी अन्तर्क्रियाले जीवित प्राणीहरू र उनीहरूको वातावरण बीचको निरन्तर ऊर्जाको आदान प्रदान गर्दछ।
अन्तर्क्रियाको जटिलताका कारण, प्रजातिहरूको निर्भरता र उनीहरूले कार्यक्षमता पूरा गर्छन्, ईकोसिस्टमको विस्तार हो स्थापित गर्न धेरै गाह्रो। एक पारिस्थितिकी तंत्र एकल र अविभाज्य कार्यात्मक एकाई होइन तर धेरै साना एकाईहरू मिलेर बनेको हुन्छ जुन तिनीहरूको अन्तर्क्रिया र आफ्नै कार्यक्षमता हुन्छ।
इकोसिस्टममा त्यहाँ दुई अवधारणाहरू हुन्छन् जुनसँग धेरै नजिकको सम्बन्ध हुन्छ किनभने जीवहरू तिनीहरूमा निर्भर छन्। पहिलो हो आवास। वासस्थान भनेको त्यो स्थान हो जहाँ जीव बस्दछ र विकास गर्दछ। वासस्थान अजैविक भौतिक क्षेत्रबाट बनेको हुन्छ जहाँ जीवहरू बस्दछन् र जैविक तत्त्वहरू जहाँ यसले अन्तरक्रिया गर्दछन्। एउटा बासस्थान ताल भन्दा ठूलो वा एन्थिल जस्तो सानो हुन सक्छ।
इकोसिस्टमसँग सम्बन्धित अन्य अवधारणा हो पारिस्थितिक कोनाडा। यसले इकोसिस्टममा जीव भएको फंक्शनको वर्णन गर्दछ। अर्को शब्दहरुमा, जीव जुन जैविक र अजैविक कारकहरु संग सम्बन्धित छ। तिनीहरू हेटेरोट्रोफिक जीवहरू, स्क्याभेन्जरहरू, डेकम्पोजरहरू, इत्यादि हुन सक्छन्। यो भन्न सकिन्छ कि इकोलोजिकल कोशिस पेशा वा काम हो जुन कुनै इकोसिस्टम भित्र रहन्छ जुन यो बस्दछ।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जैव क्षेत्र एक धेरै जटिल प्रणाली हो जहाँ थुप्रै सम्बन्धहरू छन् जुन ग्रहमा जीवनका कन्डिशनिंग कारकहरू हुन्। इकोसिस्टमहरू टाढा राख्नु आवश्यक छ प्रदूषण र गिरावट हाम्रो गतिविधिहरू जीवित प्राणीहरूको सबै सम्बन्ध कायम गर्न सक्षम हुनको लागि। वातावरणमा प्रत्येक जीवले आफ्नो कार्य पूरा गर्दछ र कार्यहरूको त्यो सेटले हामीलाई स्वस्थ अवस्थामा बाँच्न सम्भव बनाउँछ। यसैले हाम्रो ईकोसिस्टमहरूको रक्षा र संरक्षण गर्न यो महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण छ ताकि हामी राम्रोसँग बाँच्न सक्छौं जीवनको गुणस्तर।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » जीवशास्त्र के हो?
BRENDA TREBEJO रोड्रिज भन्यो
BRENDA TREBEJO रोड्रिजलाई जवाफ दिनुहोस्
लिजेथ रोजास भन्यो
यसले मलाई धेरै मद्दत गर्यो, धन्यबाद
Lizeth रोजालाई जवाफ दिनुहोस्
जानकारीको लागि धन्यबाद, यसले मलाई धेरै मद्दत गरेको छ।